KANBAE TOWERS (Golden Thitsar Co., Ltd.) | iMyanmarHouse.com
38572 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီး
KANBAE TOWERS သည် ရန်ကုန်မြို့၏ ဒုတိယစီးပွားရေးဇုံအဖြစ် သတ်မှတ် ထားသော ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ ကံဘဲ့ဘူတာရုံလမ်းပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားပါသည်။ ရန်ကင်းမြို.နယ်၏ မြေဧရိယာ ၂.၂၀၉ ဧကပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားခြင်းကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနည်းငယ်မှ မြင့်မားသောအကျိုးခံစားခွင့်ကို ပြန်လည်ရရှိနိုင်သည်။
အနှစ် (၆၀) ဂရန်မြေ အမျိုးအစားပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသောကြောင့် သားစဉ်မြေးဆက် လက်ဆင့်ကမ်းပေးနိုင်ပါသည်။
Kanbae Towers မှ ၁၀ မိနစ်ခန့် လမ်းလျောက်သွားရုံဖြင့် ရန်ကုန်မြို.ရဲ. အထင်ကရ နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အင်းယားကန်ကိုရောက်ရှိနိုင်သည်။
Kanbae Towers ၏ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အဆင့်မြင့် Hotels များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ ၊ Supermarkets များ၊ ကျောင်းများ ၊ ဆေးရုံများ စုံလင်စွာ တည်ရှိပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့် Kanbae Towers Condo ကို နေထိုင်ရန် အတွက်ဖြစ်စေ ၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံရန်ဖြစ်စေ အထူးပင်သင့်လျော်ပါသည်။
ကွန်ဒိုတစ်ခုမှာ ပြည့်စုံစွာပါဝင်ရမည့်လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ ဈေးဝယ်စင်တာ၊ ရေကူးကန်၊ အားကစားခန်းမ၊ ကလေးကစားကွင်း၊ ပန်းခြံနှင့် အနားယူအပန်းဖြေနိုင်သော နေရာများထည့်သွင်း တည်ဆောက်ထားခြင်းတို့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို.၏ လိုအပ်ချက်များကို တစ်နေရာတည်း ပြီးပြည့်စုံစွာ ရရှိနိုင်ပါသည်။
လုံခြုံရေးစနစ်များအနေဖြင့် ၂၄ နာရီ CCTV system , E Card system , Sensor System , Video Intercom System , Public Security System စသည့်စနစ်များကို ပြည့်စုံစွာထည့်သွင်းထားခြင်းကြောင့် လူကြီးမင်းတို. မိသားစု နှင့် နေအိမ်လုံခြုံရေးအတွက် အလွန်ပင်စိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်ပါသည်။
Smart Condominum ဖြစ်တဲ့တွက် Free wifi ပါဝင်ခြင်း ၊ အခန်းတွင်း ပစ္စည်းများအား Smart Phone (သို.မဟုတ်) Tablet တို့မှ ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း၊ အလိုအလျောက်ကားပါကင်စနစ်ပါဝင်ခြင်း၊ ရေသန့်စင်စနစ်ထည့်သွင်းပေးထားခြင်း စသည့် နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများ ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားခြင်းကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ခေတ်မီစွာနေထိုင်နိုင်ပါသည်။
Kanbae Towers ကွန်ဒိုတွင် 1 Bedroom ,2Bedrooms and3Bedrooms အခန်းများအား အကျယ်အဝန်းအားဖြင့် 438 sqft မှ 1121 sqft အတွင်း တည်ဆောက်ထားပါသည်။ အခန်းတွင်းပြင်ဆင်မှုအနေဖြင့် ဧည့်ခန်းတွင် ၂” ပါတ်လည် ကြွေပြားခင်းပေးထားခြင်း ၊ အိပ်ခန်းများတွင် သစ်မာပါကေး 12 mm အထူခင်းပေးထားခြင်း ၊ ရေချိုးခန်း တွင် ကြွေပြားအပြည့်ကပ်ပေးထားခြင်း ၊ ဘေစင် ၊ ဘိုထိုင် ၊ ရေပန်း တို့ပြည့်စုံစွာထည့်သွင်းပေးထားခြင်း၊ မီးဖိုခန်းတွင် အပေါ်အောက်နံရံကပ်ဘီရို၊ မီးဖို နှင့် ညော်စုပ်စက် များ စုံလင်စွာ ထည့်သွင်းပေးထားခြင်း၊ နံရံ နှင့် မျက်နှာကျက်များတွင် High quality white paint များ သုတ်ပေးထားခြင်း ၊ ဧည့်ခန်း နှင့် အိပ်ခန်းများ တွင် Air Con တပ်ဆင်ပေးထားခြင်း တို့ပါဝင်ပါသည်။
အမွတ္ ၉/၁၁ ကံဘဲ့လမ္း (သို.)သစၥာလမ္း ၊ ရန္ကင္းျမိဳ.နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ.။
SSC အဆင့္ျမင့္ ေဆးရံု
Golden Thitsar Co., Ltd.
No. 9/11 , Kanbae Road (or) Thitsar Street, Yankin Township, Yangon